China New Low Power Belt chụpụrụ Air Compressor emepụta na suppliers |ZERLION
Ngwakọta ikuku nke Silent Mmanụ efu
Igwe ihe mkpuchi ikuku nke nwere ọgụgụ isi
Igwe ntụtụ ikuku na-ebugharị ozugbo
Igwe Igwe Igwe Ọdụdọ Igwe Ọdụdọ Ikuku Compressor nwere ọgụgụ isi na-adịgide adịgide
Ọkara na elu mgbali ịghasa ikuku compressor
Ọhụrụ obere ike eriri ikuku Compressor
A na-eji ígwè nkedo nodular na-eguzogide ike dị elu na ịdị arọ nguzozi okpukpu abụọ iji hụ na nkwụsi ike kachasị mma nke ọrụ ahụ bụ crankshaft;
Emebere mgbanaka mmanụ piston na mgbanaka ígwè abụọ.Gbaa mbọ hụ na oriri mmanụ dị ala, obere nlọghachi azụ, belata mmanụ mmanụ, melite arụmọrụ mkpakọ;
A na-eji moto aluminom square nwere ọdịdị mara mma na mmetụta nkwụsị ọkụ dị mma;N'otu oge ahụ, moto adopts mba ọla kọpa enameled waya, silicon ígwè mpempe akwụkwọ, anọ ọsọ, zuru ike, nnukwu mmalite torque, kwụsiri ike ọrụ, ala okpomọkụ ịrị elu, ogologo ọrụ ndụ na ndị ọzọ magburu onwe àgwà;
Nnukwu tank nchekwa ikuku, belata ọnụ ọgụgụ pneumatic moto, melite ntụkwasị obi nke moto;
Amụma iji mepụta nkọwapụta ngwa ahịa dị mma
Obere ikpochapu okpomọkụ na ogologo ndụ ọrụ.
Nnukwu crankcase, obere nrụgide, adịghị mfe ịgbanye mmanụ ọkụ, arụ ọrụ kwụsiri ike.
1. Ahịrị dị nro, imewe ihe ngosi avant-garde, nhazi ezi uche dị na ya, nchekwa nchekwa, usoro kọmpat;
2. Ọkachamara valvụ na nhazi ọwa na-asọpụta, na-ebuli muffler oriri, mkpọtụ dị ala karịa ọkọlọtọ mba;
3. A na-eji ihe nkedo nke mba ụwa mee ihe nkedo crankcase, na-enwekwu mgbidi mgbidi, ezigbo siri ike na ike iji meziwanye nkwụsi ike nke ọrụ;
4. A na-eji ígwè nkedo na-eyi ihe na-ekpuchi cylinder, na-enwekwu mgbidi mgbidi, akwa mkpuchi mkpuchi, obere nrụrụ na okpomọkụ dị elu na mmetụta nkwụsị ọkụ dị mma;
5. A na-eji ihe nkedo nodular dị elu na-eyi ike na-eguzogide crankshaft na nguzozi okpukpu abụọ iji hụ na nkwụsi ike kachasị mma nke ọrụ;
6. Emebere mgbanaka mmanụ piston na mgbanaka ígwè abụọ.Gbaa mbọ hụ na oriri mmanụ dị ala, obere nlọghachi azụ, belata mmanụ mmanụ, melite arụmọrụ mkpakọ;
7. A na-eji moto aluminom square nwere ọdịdị mara mma na mmetụta nkwụsị ọkụ dị mma;N'otu oge ahụ, moto adopts mba ọla kọpa enameled waya, silicon ígwè mpempe akwụkwọ, anọ ọsọ, zuru ike, nnukwu mmalite torque, kwụsiri ike ọrụ, ala okpomọkụ ịrị elu, ogologo ọrụ ndụ na ndị ọzọ magburu onwe àgwà;
8. Nnukwu tank nchekwa ikuku, belata ọnụ ọgụgụ nke pneumatic moto, melite ntụkwasị obi nke moto;
9. The ọgụgụ isi bufee na-emeghe na-adọ echebe nwere ike izere imebi moto bụrụ na voltaji na-emeghe na-adọ;
10. Ihe mkpuchi mkpuchi mechiri emechi na-eme ka nchekwa nchekwa dịkwuo mma;
11. Mgbanwe nrụgide, valvụ otu ụzọ, valvụ nchekwa, ihe nrịbama nrụgide na akụkụ ndị ọzọ na-enye ndị na-ebubata ụlọ a ma ama;
Nhazi:Anyị nwere otu mmepe nke onwe anyị, nwere onye na-anọchi anya mmepe nke ikike, nwere ike imeju ndị ahịa dị iche iche, mkpa dị iche iche.
Ọnụ:Anyị nwere ụlọ ọrụ igwe nke anyị.Ya mere, anyị nwere ike ịnye ọnụahịa kacha mma na ngwaahịa kacha mma ozugbo.
Ogo:Anyị nwere ụlọ nyocha nke onwe anyị na akụrụngwa nyocha dị elu na nke zuru oke, nke nwere ike hụ na ngwaahịa dị mma.
Mbupu:Anyị dị naanị kilomita 220 site n'ọdụ ụgbọ mmiri Ningbo, ọ dị ezigbo mma ma dị mma ibuga ngwongwo na mba ọ bụla.
Ike:Anyị kwa afọ ịghasa compressor mmepụta ikike karịrị 40000 pc, piston ikuku compressor mmepụta ike karịrị 300000 pc .nke anyị nwere ike izute mkpa nke dị iche iche ahịa na dif.
Ọrụ:Anyị na-elekwasị anya na ịmepụta ngwaahịa dị elu maka ahịa ahịa kachasị elu.Ngwaahịa anyị kwekọrọ na ụkpụrụ mba ụwa ma na-ebuga ya na Europe, America, Japan, na ebe ndị ọzọ na gburugburu .Anyị na-elekwasị anya n'ịzụlite ngwaahịa dị elu maka ahịa ahịa kachasị elu.Ngwaahịa anyị kwekọrọ na ụkpụrụ mba ụwa, a na-ebuga ya na Europe, America, Japan na ebe ndị ọzọ gburugburu.
Asambodo ntozu oke
Banyere ngwa ahịa:N'ihi na ọ bụ ngwaahịa mmepụta ihe, ngwaahịa ndị dị na shelves nke ụlọ ahịa ahụ nwere ike ọ gaghị enwe ngwaahịa, ị nwere ike ịgakwuru ndị ahịa anyị, ọrụ ndị ahịa anyị ga-aza ajụjụ gbasara ngwaahịa maka gị yana dị ka mkpa gị si hazie ngwaahịa ahụ; dejupụta ozi adreesị nnyefe ziri ezi, iji mee ka ngwa ngwa dị mfe n'oge na nnyefe nke ngwongwo n'aka gị.
Ihe gbasara ịbanye maka:Biko jide n'aka na ị kwadoro n'ọnọdụ dị mma tupu ịbanye, ma ọ bụrụ na mebiri emebi biko mepee igbe maka nyocha, ma ọ bụrụ na awara awara anabataghị nyocha, ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị site na ekwentị (Anyị abụghị maka mmebi na nnata.) Ya mere, iji chebe ikike na ọdịmma gị, biko jide n'aka na ị kwadoro nyocha ahụ.
Banyere ngwa ngwa:Dị ka ọ na-agafe agafe logistics, njem okirikiri na-emetụta nke ukwuu site na mpụga ọnọdụ dị ka gburugburu ebe obibi na ihu igwe.Biko jiri ndidi chere ma lekwasị anya na usoro ngwa ngwa ka ị dịrị njikere ịnata ngwongwo ndị ahụ tupu oge eruo. Ngwa ngwa a na-ahaziri, mkparịta ụka ọzọ, daalụ maka imekọ ihe ọnụ!
Nke gara aga: Ọhụrụ ike dị ala Direct ebugharị ikuku Compressor
Osote: Obere ike nwere ọgụgụ isi ịghasa ikuku Compressor
100 Liter Belt na-ebugharị ikuku Compressor
30 galọn Belt na-anya ikuku Compressor
50 lita eriri igwe na-ebugharị ikuku
Mgbapu ikuku Compressor Belt Driven
Belt Na-anya Na Board Air Compressor
Na bọọdụ ikuku Compressor Belt na-anya
Obere eriri ikuku Compressor
Igwe ọkụ ikuku na-ebugharị eriri ike dị elu
Igwe ọkụ ikuku na-ebugharị eriri ike dị ala
© Nwebiisinka 20102021: Ikike niile echekwabara.Hot Products>